I-FAQ-Jiangxi Textile Group Imp & Exp. Co., Ltd ..
Ifashoni ezinzileyo ayithethi ukuba ifanelekile epokothweni. Ngaba abathengi bakulungele ukuchitha into enye ekhoyo kwenye indawo ngexabiso eliphantsi? Ngaba ifashoni ezinzileyo yinto nje?
Zininzi iindlela zokuzinza. Ke, inkolelo yokuba ifashoni ezinzileyo isiphelo esiphezulu ayisiyonyani. Amalaphu angakumbi nangaphezulu anikezelwayo acocekile kwaye akanyanzelekanga ukuba abenexabiso eliphezulu. Njengekotoni yendalo efama ngokufanelekileyo kwaye iveliswe kwaye yidaywe ngaphandle kweedayi eziyityhefu. Amaxesha amaninzi, eyona ndleko iphambili yindlela eyenziwa ngayo.
Ke, umbuzo uya kuba, ngaba abantu bakulungele ukuchitha ngaphezulu kwinto eyenziwe ngcono?
Lo ngumbuzo obalulekileyo, kuba kusenokwenzeka ukuba ekuqaleni ixabiso elisezantsi linomtsalane, kodwa loo nto ayinakwenziwa ngendlela efanayo, ayenziwanga nokuba ihlale, ikhusele okusingqongileyo, kwaye ithathele ingqalelo abantu into.
Ngaba ke abantu bazimisele ukutsiba kwinqwelo yokulibaziseka elibazisekileyo?
Ifashoni ezinzileyo ayisiyondlela idlulayo. Ifashoni ezinzileyo ihambela phezulu, kancinci kodwa ngokuqinisekileyo, njengoko abantu bejonga ukwenza izigqibo ezingcono kwaye baqwalasele okusingqongileyo kunye nokuziphatha. Imeko-bume isengxakini. Njengokuba abantu besiya besazi ngakumbi, oku kuchaphazela ngqo iinzame abazenzayo zokuphucula ubomi babo babo kunye nabanye, namhlanje nakwilixa elizayo. Abantu abaninzi bajonga apho yenziwe khona into kunye nokuba yenziwe ngantoni, kodwa xa into enomdla iphuma kubo, kugxilwe kungatshintsha. Abanye abantu banqabile malunga nokuthenga indawo, okanye ukwenziwa eUnited States of America, ke oko kuya kuba ngumthengi othile. Abanye bafuna kuphela ukuthenga ikotoni, ke leyo yenye. Ke, ixhomekeke emntwini.
Amaketanga okubonelela ngefashoni ahlala enzima kakhulu, kangangokuba kunzima kakhulu ukwazi ukuba lilaphu elenziwe ngantoni, kwaye apho lenziwa khona ngokwemvelaphi, ubumbano kunye nemveliso. Kungenxa yoko le nto ukungafihli nto kunomtsalane kubantu abaninzi. Ke, abathengi baya besazi ngakumbi nangakumbi. Kukwizigaba zokuqala. Ukuba sijonga ukuba ishishini lokutya lifike kude kangakanani, siyaqonda, kuyafana nakwifashoni. Njengoyena mntu ungcolisayo wesibini ngobukhulu emva kweoyile kunye negesi, ifashoni ibambe ukubaluleka okuthile. Kukwayimfuneko esisiseko, njengokutya, ke akukho mathandabuzo ukuba abathengi baya kujonga iimpahla ngakumbi. Abantu baya kufuna ukwazi ukuba kutheni zininzi kangaka ityhefu ezingubeni zabo nokuba kutheni nabani na ecinga, kulungile.